Inona ireo fitaovana maoderina tsara indrindra amin'ny Amazon?
Ampiasa an-tapitrisany maro manerantany mampiasa Amazona hitady sy hividy ny karazan-tsakafo rehetra, manomboka amin'ny sakafo sy ny famaranana amin'ny sakafo ary ny famaranana amin'ny serivisy an-trano. Tsara ny mividy amina Amazon amin'ny finday eto ka afaka mahita haingana ireo zavatra ilainao ianao noho ny fisintonana maro sy ny asa. Ankoatra izany, afaka mamaky ny tamberin'ny mpampiasa ianao ary manamarina ny voka-pifidianana. Tsy misy loza mety hitranga eto ianao rehefa mikarakara ny mpanjifa sy ny mpivarotra rehetra Amazon.
Mora ny manangana ny kaonty mpanjifa amin'ny Amazon. Na izany aza, tsy mora ny mahazo tombony amin'izany. Ilainao ny manatsara ny pejinao araka ny fepetra algorithm A9. Iray amin'ireo dingana ilaina amin'ny fampielezan-kevitra fanentanana Amazon dia fikarohana teny fototra. Ny fotoana sy ny ezaka fampiasanao amin'ny tanjon'ireo teny fanalahidy tianao amboarina dia afaka mampitombo ny fahafahanao miditra amin'ny vola ary manangana ny lahatsoratry ny vokatra ho an'ny fikarohana voalanjalanja sy sarobidy.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fitadiavana fikarohana teny fototra amin'ny Amazon mba hahitana ny vokatrao amin'ny mpanjifa mety amin'ny SERP. Hijery akaiky kokoa ireo tenimiafina sokajy samihafa Amazon izahay ary hiezaka hahita ilay sarobidy indrindra.
Amazon fitaovana fikarohana fikarohana
Maro ireo antony mety hanampy ny vokatrao ambony indrindra amin'ny pejin'ny fikarohana Amazon. Anisan'izany ny kalitao sy ny habetsahan'ny fanamarinanao, ny habetsaky ny varotra nataonao tamin'ny lasa, ny tahan'ny fanodinana ny pejin-tserasera (firy ny mpampiasa ny mividy ny vokatrao), ary ny vokatra azo (ny vokatr'ireo vokatrao amin'ny fangatahan'ireo mpanjifa) . Ny ankabeazan'ireo asam-pamokarana ireo dia mitaky fotoana, fa ny fitomboan'ny lisansa misy anao dia zavatra azo alamina avy hatrany.
Ny tombontsoa lehibe indrindra dia ny fomba amam-panazongozonana mba hahalalany tsara ny fitenin'ny fikarohana mila ampidirina ao amin'ny lisitrao mba hampitomboana ny varotrao.
Aoka àry isika hiresaka momba ny sasantsasany sy ireo paikady hahitana ny teny manan-danja indrindra ho an'ny fampiroboroboana ny orinasanao Amazon.
Ity fitaovana matihanina ity dia manampy hitady hevitra tsara ho an'ny orinasa. Mitovy amin'ny Google Keyword Planer izany. Voalohany indrindra dia mila miditra amin'ny teny fanolorana ianao ary avy eo dia mahazo lisitry ny teny fikarohana mifandraika amin'ny mpanjifa izay mety hampiasainao hahitana ny vokatrao. Ny tombony lehibe indrindra azon'ity fitaovana ity dia ny ahafahanao mitady fikarohana teny manokana ho an'i Amazon. Izy io dia manampy amin'ny famolavolana ny teny filamatra mifandraika amin'ny fikajiana amin'ny fitadiavana fijerena ny soso-kevitra fikarohana amazonaly.
Amazon manome ny mpiserasera amin'ny soso-kevitry ny fikarohana rehefa mametraka fanontaniana manokana ao anaty boaty. Amazon dia mampiasa algorithm be pitsiny mba hanome ny mpampiasa ny vokatra tsara indrindra amin'ny fangatahan'izy ireo. Mampiasa an'io endri-javatra Amazon io ny Keyword Tool mba hamoronana endri-teny lava lava lava ho an'ny fanadihadiana Amazon lisitra. Rehefa mametraka ny teny fototra ao amin'ny rafitra ianao dia mametraka izany ao amin'ny boaty fikarohana Amazon ny Keyword Tool ary manainga azy amin'ny litera sy tarehimarika samihafa. Vokatr'izany, mahazo lisitry ny soso-kevitry ny teny fanalahidy ho an'ny orinasanao ianao Source .